Iwu kuki ▷ Discover Online ▷ ➡️
1 Iwu kuki
1.1 Kuki kuki nke webụsaịtị a
1.2 Kuki ndị ọzọ anyị ji na webụsaịtị a yana nke ị ga-ama
1.3 Etu esi ahazi ma gbanyụọ kuki ndị a
A na-eji kuki eme ihe na weebụsaịtị a nke ndi ozo Iji mee ka ị nweta ahụmịhe nchọgharị ka mma, ị nwere ike ịkekọrịta ọdịnaya na netwọkụ mmekọrịta, iji gosi gị mgbasa ozi dabere na ọdịmma gị na inweta ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ.
Onye ọrụ ahụ nwere ike ịkpọ ụdị kuki ndị Google, Google kuki na Google Maps na-eji, dị ka ndokwa dị na ibe ya banyere ihe ụdị kuki eji.
Kuki DoubleClick enweghị ozi nke amata. Oge ụfọdụ, kuki nwere njirimara ọzọ yiri ya na ọdịdị kuki ahụ. Ejiri ihe nchọpụta a mata mgbasa ozi mgbasa ozi nke ekpughere onye ọrụ ya na mbụ; agbanyeghị, DoubleClick anaghị echekwa ụdị data ndị ọzọ dị na kuki ahụ, na mgbakwunye, amataghị ozi ahụ n'onwe ya.
Kuki mmekọrịta ọha na eze: Enwere ike ịchekwa kuki sitere na netwọkụ mmekọrịta na ihe nchọgharị gị mgbe ị na-eme nchọgharị site na Disco.online, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji bọtịnụ òkè nke Disco.online na netwọkụ mmekọrịta.
Onwe: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923
Ha na-agwụ na njedebe nke nnọkọ. Ha na-echekwa ozi onye ọrụ na oge ha iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ.
Ụbọchị 30 A na-eji kuki a iji laghachi na ichiche, njikarịcha, ịkọ na ịkọwapụta mgbasa ozi n'ịntanetị. DoubleClick na-eziga kuki na ihe nchọgharị ahụ mgbe mbipụta ọ bụla, pịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na-ebute oku na sava DoubleClick. Ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ na-anabata kuki ahụ, echekwara na ya. Ozi ndị ọzọ
PYPF 1 ọnwa Kuki kuki Mee ka obi sie ike na ịnweta ịkwụ ụgwọ PayPal. Ha nwere ike jikọta ya na akwụpalobjects.com.
Ama (na) discover.online na-enye ndị ọrụ chọrọ igbochi ntinye nke kuki ndị a kpọtụrụ aha, njikọ enyere maka ebumnuche a site na ihe nchọgharị ndị a na-ewere na ojiji ha zuru ebe niile:
Iwu kuki emelitere ikpeazụ na 18/04/2016